प्रशासनले भनेको नमाने फेरि लकडाउन गरिने - Jyotinews
प्रशासनले भनेको नमाने फेरि लकडाउन गरिने
ज्योतिन्यूज २०७७ भदौ २९ गते ७:३१
२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारको आदेश विपरित व्यापार सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले व्यापार गर्ने वातावरण बनाइदिदा आदेश विपरित व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरे फेरि बाध्य भएर लकडाउन गर्ने वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।
सरकारले कोरोना संक्रमण नफैलियोस भनेर मिलाएर व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाईदिएको समेत प्र.जि.अ. दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको लागि आदेश मान्नु भन्दा पनि आफनो र समाजको लागि कोरोना नफैलियोस भनेर मान्न जरुरी रहेको उहाँको सुझाव छ ।
आदेश पालना गरे नगरेको विषयमा बजारमा अनुगमनको साथै रिर्पोटिङ भईरहेको समेत प्र.जि.अ. दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले जारी गरेका मापदण्ड अनुसार व्यापार, व्यावसाय सञ्चालन गर्न व्यापारीहरुलाई उहाँको आग्रह छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल सरकारले जारी गरेको आदेशलाई मान्दै व्यवसाय चलाएको बताउनुहुन्छ । कुनै व्यापारीले सरकारको आदेश विपरीत काम गरेको भए त्यस्ता व्यापारीलाई कारवाही गर्न अध्यक्ष कटुवालकाे प्रतिक्रिया छ ।
हामीले सरकारको आदेशको स्वागत गरेका छौ सरकारको नियम, निती विपरित काम नगरेको दावी गर्नुहुन्छ । आदेश विपरीत व्यवसाय खोल्नेलाई सरकारले अनुगमन गरेर कारवाही गर्न व्यसायी कटुवाल बताउनुहुन्छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका डा. शेरबहादुर पुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । कोरोनालाई सामान्य रुपमा नलिन समेत उहाँको आग्रह छ । ,यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
न्यादी हाइड्रोपावरले २२ करोडको आइपीओ निस्कासन गर्ने
सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन
सीमापारिका तस्करले ढुङ्गामुढा गरे सशस्त्र प्रहरीमाथि
‘पर्नु पिर पर्यो’ मा सुधीर र रेश्मा (भिडियोसहित)
संविधान दिवसकाे अवसरमा ५ सय ३१ जना कैदीलाई माफी
छोटो समय भए पनि राम्रो काम गरेर देखाउने छौँ : मुख्यमन्त्री शाक्य
सार्वजजिक सवारी साधनको भाडादर बढ्यो
‘पठाओ’ को व्यावसायिक यात्रा सुरु भएको ३ वर्ष पूरा
थपिए ९ सय ५३ कोरोना संक्रमित, १ हजार ३७१ जना डिस्चार्ज
पर्वत पहिरो : चार जिल्लाको सम्पर्क विच्छेद, हेलिकोप्टरबाट बिरामीको उद्धार
संखुवासभा हत्याकाण्डः हत्या गरेको आरोपमा आफन्त पर्ने पक्राउ
वामदेव गौतमले एमाले छाडे, सबै पदबाट दिए राजीनामा